चितवनमा वागमती प्रदेशका कोभिड प्रयोगशालाका चिकित्सक एवं प्राविधिकहरुलाई तालिम – Saurahaonline.com
चितवन : राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले बागमती प्रदेशका कोभिड प्रयोगशालामा काम गर्ने चिकित्सक एवं प्राविधिकहरुका लागि दुई दिने तालिम आज बिहीबारदेखि चितवनमा शुरु गरेको छ । अनुभव आदान प्रदान गर्दै कामका शिलशिलामा आईपरेका समस्याहरु समाधान गर्न र आगामी दिनमा गर्न सकिने सुधारका विषयमा प्रशिक्षण दिईने भएको हो ।
तालिमको उद्घाटन गर्दै भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले पिसिआर प्रयोगशालामा पछिल्लो समय आमूल परिवर्तन आएको बताउनुभयो । चितवन जिल्लामा मात्रै १० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको पिसिआर परीक्षण गरिएको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो “चितवनका तीन वटा ल्याबमा ७० हजारको कोभिड परीक्षण गरिएको छ ।” उहाँले यस क्षेत्रमा जोखिम मोलेर काम गरेकाहरुप्रति सरकारले उचित मूल्यांकन गरेको बताउँदै भन्नुभयो “थप समस्या भए समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”
उहाँले भन्नुभयो “प्रयोगशालामा काम गर्नेहरु तपाईहरु चिकित्सकको पनि चिकित्सक हो । तपाईहरुको प्रयोगशालाको नतिजाका आधारमा चिकित्सकले बिरामीलाई औषधि दिन्छन् ।” प्रयोगशालाको नतिजा विश्वसनीय भए मात्रै उपचार हुने उहाँको भनाई थियो ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका डा. अधिकारीले प्रयोगशाला परीक्षणको अभावमा दुर्गम जिल्लाहरुमा रोग फैलिंदा समेत अज्ञात रोग भन्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “चितवन जस्ता ठाउँमा जस्तोसुकै रोग आएपनि अज्ञात रोग भन्न पर्दैन । त्यो प्रयोगशाला परीक्षणकै कारणले हो ।”
कार्यक्रममा भरतपुर अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. जगन्नाथ तिवारीले जिल्लामा तीन वटा पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला रहेको भन्दै यसले उपचार र कोभिड रोकथाममा सहयोग पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामी आजको भोलि परीक्षणको नतिजा दिन सक्षम भएका छौं ।”
बागमती प्रदेश प्रादेशिक प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक नारायण कार्कीले कोभिड प्रयोगशालामा काम गर्नेहरुले चाडपर्वको समयमा समेत विदा नबसी काम गरेको बताउँदै सुरक्षाका विधिका बारेमा थप चनाखो हुन यो तालिम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका प्रमुख रमेशकान्त पौडेल, रमेश धमलालगायतले तालिमको प्रभावकारितताको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
जैविक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको परिचय, उपकरणको निर्मलीकरण, जैविक सुरक्षाको तह, नमूना संकलन, ढुवानीमा नमूना ढुवानीको बेला अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि, फोहोरको व्यवस्थापन, विवरण संकलन र अध्यावधि लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिईने छ ।
दुई दिने तालिममा बागमती प्रदेशका पिसिआर प्रयोगशालामा कार्यरत ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका डा महेश अधिकारी र भरतपुर अस्पताल कोभिड १९ प्रयोगशालाका प्रमुख डा. नितु अधिकारीले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ ।